UMnyango Wezangaphandle wase-Ecuador: U-Assange unikeze ubuzwe base-Ecuadorian
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Human Rights » UMnyango Wezangaphandle wase-Ecuador: U-Assange unikeze ubuzwe base-Ecuadorian
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ze-Ecuador • Izindaba zikaHulumeni • Human Rights • Izindaba • Abantu • ezithrendayo Manje • Izindaba ze-UK Breaking
UMnyango Wezangaphandle wase-Ecuadorian (MFA) uthi banikeze uJulian Assange ilungelo lokuba ngumuntu uqobo. Ukuphendula kwe-MFA kuza ngemuva kosuku ngemuva kokuthi uQuito kubikwa ukuthi unikeze u-Assange umazisi
Iphasipoti ingathola isinyathelo sakhe sokuqala sokuthola amasosha omzimba, njengoba i-Ecuador ifuna ukuxazulula ukuhlala kuka-Assange enxeshezelweni. Umsunguli we-WikiLeaks ubelokhu ehlanganiswe kwinxusa lase-Ecuadorian iminyaka emihlanu.
Ihhovisi lezangaphandle lase-UK kubikwa ukuthi lisichithile isicelo esivela kuQuito sokuthi leli lizwe lisebenze njengabanxusa. Iphasipoti kuthiwa wayinikwa ngoDisemba 12.
UNgqongqoshe wezangaPhandle e-Ecuador uGuillaume Long, uthi izwe lifuna isisombululo “esinesizotha futhi esinobulungiswa” nohulumeni wase-UK ngodaba luka-Assange. Ubuye wathi u-Assange ngeke ashiye inxusa lase-Ecuador ngenkathi kungekho ziqinisekiso zokuphepha.
I-Ecuador ivamise ukukhipha amakhadi anjalo omazisi kubantu abafuna isimo sokuhlala, okubizwa ngama-cedula. Isivumelwano saseVienna mayelana nobudlelwano bamanxusa sithi umuntu ophethe ipasipoti yenxanxathela yezempi akanacala ekushushisweni. Akusona isiqinisekiso, noma kunjalo.
U-Assange ubehlala ngaphakathi kwenxusa lase-Ecuador eLondon kusukela ngo-2012, ngesikhathi esolwa ngokuhlukumeza ngokocansi eSweden. Yize abashushisi baseSweden bewahoxisile amacala, amaphoyisa aseBrithani ahlala ngaphandle kwenxusa elungele ukubopha umsunguli weWikiLeaks ngokwephula imibandela yebheyili yakhe yango-2012. U-Assange uyenqaba ukuzinikela kuziphathimandla zaseBrithani, esaba ukuthi bazombuyisela e-United States lapho elindele ukushushiswa khona ngenxa yemisebenzi yakhe yokuvukela umbuso.